तमरा अभियानको प्रेस नोटः अब संघर्षको लागि अभियानमा सरिक हुन मधेसका सबै क्रान्तिकारीहरुमा अपील ।
तमरा अभियानको प्रेस नोट
तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान आफ्नो संगठन सुदृढीकरणका लागि हाल बिभिन्न जिल्लाहरुमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएको छ । विचारले लैस संगठन र ठोस कार्यक्रम प्रतिको प्रतिवद्धताकै आधारमा मधेस केन्द्रीत पार्टी तथा राजनीतिक संगठनहरु अविभाजित तथा अविचलित रहन सक्दछ । वितेको समयमा मधेसी राजनीतिक पार्टीहरूले विचारलाई प्रधानता नदिएको र आफुहरुले तय गरेको कार्यनीतिमा प्रतिवद्ध भै अगाडी बढन नसकै कारणले एकतावद्ध नरहेको तथा पटक-पटक विभाजित हुनु परेको यथार्थ हो । पटक-पटकको विभाजन, गूट र फूटको कारणले नै मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न सकिएको छैन । अबको आन्दोलन बरु ढिलो होस् । तर, आन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा हुनैपर्दछ । यसको लागि अतितबाट शिक्षा लिएर आजैदेखि विचारमा आधारित र ठोस कार्यनीतिका प्रति दृढ संगठनको निर्माण कार्यमा तमरा अभियान बढेको छ ।
तमरा अभियानको यस सोचलाई मूर्तरुप दिन हाल यस संगठनमा सरिक हुन क्रान्तिकारी मधेसी नेता-कार्यकर्ताहरुमा चाहना बढेको छ । भर्खरै सप्तरी जिल्लाको एक कार्यक्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम-मधेस पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेकानन्द सिंह, महासचिव सुरेन्द्र प्रसाद साह लगायतका दर्जन बढी केन्द्र स्तरीय नेताहरु तमरा अभियानमा सरिक भए । यसरी नै सप्तरीमै पहिलो मधेस आन्दोलन बेलाका मधेसी जनअधिकार फोरम-नेपालका जिल्ला अध्यक्ष हरेराम यादव लगायत महत्वपूर्ण नेताहरु अभियानमा सरिक भएका छन् । सर्लाहीमा स्व. श्री गजेन्द्र नारायण सिंहका सद्भावना परिषदकालिन सहकर्मीहरु राधाकान्त झा र माष्टर साहेव बैद्यनाथ महतो लगायतका उपल्लो तहका नेताहरु अभियानमा सरिक भएका छन् । यसै क्रममा आजै विराटनगरमा एकिकृत ने.क.पा.(माओवादी) का नेता राम प्रसाद साह, सदभावना पार्टीका नेता सुमन साह लगायत मधेसी जन अधिकार फोरम-मधेसका केही जिल्ला स्तरीय नेताहरु तमरा अभियानमा सहभागी भएका छन् । जेठ २१ गते विराटनगरमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका संयोजक जय प्रकाश गुप्ताले संगठनमा प्रवेश गर्नेहरुको स्वागत गर्दै सदस्यता दिनु भयो ।
तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान वर्तमान संविधान सभाबाट मधेस आन्दोलनका चाहना अनुसार संविधान बन्ने कुरामा आशा राखेको छैन । यस्तो अवस्थामा हाल संविधान सभामा रहेका मधेसका सत्ता समर्पण र मुद्दा विर्सजनवादी दलहरुले निश्चित रुपमा मधेस विरोधी संविधानलाई स्वीकार्ने नै छन् । तर, त्यस्तो एकात्मवादी संविधानलाई भने आम मधेसी जनताले किमार्थ पनि स्वीकार्ने छैनन् । फलतः मधेसी जनताले आत्म समर्पण र संघर्षको विकल्पमा संघर्षलाई नै रोज्नु पर्ने हुन्छ । यस संघर्षको नेतृत्व अब तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानले नै गर्नेछ । यसर्थ, यस संघर्षको तयारीका लागि यस अभियानमा सरिक हुन अभियान मधेसका सबै क्रान्तिकारी नेता-कार्यकर्ताहरुमा अपील गर्दछ ।
बिराटनगर, जेठ २१ गते, २०७१